Ngaba ukrelekrele kunoMark Cuban? | Martech Zone
Ngaba ukrelekrele kunoMark Cuban?
NgoLwesihlanu, Februwari 2, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Ungaziva ungcono kancinci ngawe emva kokundwendwela iJuice Studio, enezixhobo zokuhlalutya kwi-Intanethi zokuqinisekisa inqanaba lokufunda kwendawo yakho…
KwiJuice Studio: Inqanaba lokufunda ii-algorithms zibonelela ngesikhokelo esibi, njengoko behlala bevuza izivakalisi ezifutshane ezenziwe ngamagama amafutshane. Ngelixa zizikhokelo ezirhabaxa, zinokunika uphawu olululo lokuba uwubekile umxholo wakho kwinqanaba elifanelekileyo labaphulaphuli bakho.
Ke yeyiphi inqanaba lebakala ekufuneka ulile ukuze ufunde ezi bhloko zilandelayo? Nantsi isampulu yezinye iisayithi ezilishumi, ezinye zazo ziibhloko ezili-100 eziphezulu, kunye nenqanaba lokufunda elinxulumene noko:
ENew York Times = 5.99
UMichelle Malkin = 6.70
Indawo yam = 6.92
IBoing Boing = 6.96
Ndijonge ezinye iisayithi (andizukuzikhankanya)… nee yikes! Abanye babo bafumana amanqaku asezantsi kakhulu. Jonga indawo yakho nge Uvavanyo lokuFunda kweJuice.
QAPHELA: Ukubeka nje esi sithuba kuya kuguqula amanqaku am kancinci… ngethemba lokuba kwicala elifanelekileyo!
Feb 3, 2007 ngo-4: 08 AM